SPM News: Somali 4.22.22
Published April 22, 2022 at 12:46 PM CDT
Mucaaradnimada gudoomiyaha gobolka Iowa Kim Reynold ee ah in uu abuuro deeqo waxbarasho oo loogu talagalay 10,000 ardayda dugsiyada gaarka loo leeyahay ayaa ka imaanaya xubno ka tirsan xisbigeeda.
Wakiilka Jamhuuriga Megan Jones ee Sioux Rapids, oo ka soo horjeeda qorshaha, ayaa leh codadka "kaliya ma jiraan" Aqalka si loo meel mariyo waxayna ka walwalsan tahay kaliya dugsiyada aagga Des Moines inay ka faa'iideysan doonaan.
Sharci-dejintu waxay ansixiyeen 2.5% kordhinta maalgelinta dugsiyada dawladda.
Gov. Nebraska Pete Ricketts ayaa ku nuuxnuuxsaday $900 milyan oo doolar dhimista canshuuraha sharci-dejiyeyaasha la ansixiyay sanadkan markii ay soo gabagabeeyeen fadhigooda Arbacadii. Sharci-dajiyayaashu waxay si degdeg ah u daryeeleen ganacsigooda sababtoo ah Ricketts ma diidin mid ka mid ah biilasha ay u soo direen toddobaadkan. Ricketts waxa kale oo uu ammaanay qorshayaasha uu sharci-dejintu meel mariyey ee aasaaska u noqon doona mashruuca kanaalka si biyaha looga weeciyo Colorado loona qoondeeyo in ka badan $1 bilyan oo ah lacagta gargaarka federaalka.
Senetarka hore ee Nebraska Ben Nelson ayaa taageeray Senetarka gobolka Patty Pansing Brooks ololaheeda loogu jiro Degmada 1aad ee Koongareeska ee gobolka. Pansing Brooks, oo ah Dimuqraadi, ayaa eegaya inuu beddelo xildhibaan hore oo Maraykan ah Jeff Fortenberry, oo Jamhuuri ah oo is casilay ka dib markii lagu helay eedeymo ah inuu ka been sheegay mas'uuliyiinta federaalka wax ku biirin olole sharci darro ah. Pansing Brooks wuxuu wajihi doonaa Sen. Mike Flood, Republican, June 28 doorasho gaar ah si loo go'aamiyo cidda u adeegi doonta inta ka hartay muddada Fortenberry ee Congress-ka.